အင်ကြင်းသန့်: မပြီးသေးတဲ့ခရီးတစ်ခု အဆုံးထိရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသူမှာ
ဒီနေ့ ရုံးမှာနေရတာ ကျွန်မစိတ်တွေ တော်တော့်ကို လေနေပါတယ်။ ရုံးကိုစရောက်ကတည်းကနေ ပြန်တဲ့အချိန်အထိ ဘာကိုမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ပြီးအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီနိုင်ငံကို ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှ အဲဒီလို စိတ်လေတဲ့ ခံစားမှုမျိုးတွေကို မကြာမကြာ ခံစားတတ်လာတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် လူက အလိုလိုနေရင်းနဲ့ကို စိတ်တွေညစ်ညူးပြီး ငိုချင်နေတတ်တယ်။
စိတ်နှလုံးညှိူးခြုံးခြင်း၊ အလိုလိုငိုချင်နေခြင်း၊ အစရှိသည်တို့မှာ စိတ်ကျရောဂါ (Depression) ရဲ့ လက္ခဏာများဖြစ်သည်လို့ စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲမှာ ကျွန်မဖတ်ရဖူးပါတယ်။ ဟုတ်များဟုတ်နေမလားတော့ မသိပါဘူး။ ကျွန်မ အဲဒီလိုစိတ်တွေလေနေရင် အများဆုံးသတိရ တမ်းတနေမိတတ်တာကတော့ မေမေ့ကိုပါပဲ။ အဲဒီလိုအချိန်တွေမှာ မေမေ့ကိုများ တွေ့လိုက်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ထိတောင်ဝမ်းသာပြီး စိတ်ခွန်အားတွေ ပြန်ရသွားမလဲ မပြောတတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လာပြီးအလုပ်လုပ်ရတာ သူများတွေအတွက်တော့ ဘယ်လိုနေမလဲမသိပါ။ ကျွန်မ အတွက်ကတော့ အတွေ့အကြုံတွေက တော်တော့်ကိုစုံခဲ့တာပါ။ (တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကာလအတွင်းမှာကိုပဲ ကုမ္ပဏီ အလုပ် ၃ခု ပြောင်းလုပ်ခဲ့ရတာပါ။) စိတ်တွေလည်း အရမ်းကိုပင်ပန်းခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာဆိုရင် ဘာကိုမှသိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ဘဲ စိတ်လိုက်မာန်ပါ တဇွတ်ထိုးလုပ်ပစ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရလာဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ဆို ကျွန်မအသက်အရွယ်နဲ့နှိုင်းစာမယ်ဆိုရင် ကျွန်မဟာ အင်မတန်မှ မရင့်ကျက်သေး၊ လူကြီးမဆန်သေးတာလို့ ပြောလို့လည်း ရပါတယ်။ ကျွန်မကို မွေးကတည်းကနေ ဘွဲ့ရပြီးသည်အထိ ဖေဖေ၊ မေမေတို့ရဲ့ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ အလိုလိုက်မှုတွေနဲ့ နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မဟာ စင်ကာပူနိုင်ငံလိုမျိုး သူတို့ကိုယ်သူတို့တော့ တော်တော် အထင်ကြီးတတ်ကြကာ ဘ၀င်မြင့်နေကြသော၊ တော်ရုံတန်ရုံလူမျိုးခြား(အနောက်တိုင်းသား လူဖြူများမပါ) ဆိုရင် အထင်သေး အမြင်သေးနဲ့ နှာခေါင်းရှုံ့တတ်သော နေရာမျိုးကို ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ထိုလူစားမျိုးတွေနဲ့ နေသားကြအောင်၊ အဆင်ပြေအောင် ကျွန်မ မနည်း ကြိုးစားနေခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီလောက်ကြိုးစားပြီး အဆင်ပြေအောင်နေခဲ့တာတောင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ အလုပ် သုံးခုပြောင်းလုပ်ခဲ့ရတာပါ။
အခုတော့ ကျွန်မတော်တော်လေးကို နေတတ်သွားပြီလို့ ထင်တာပါပဲ။ အခုလက်ရှိ ကုမ္ပဏီမှာလည်း အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားပြီးနေနေပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အကူးအပြောင်းမှာ ခံစားရတဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုလည်း ကျွန်မမခံစားချင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီလိုအချိန်တွေမှာ ကျွန်မအတွက် အဝေးကနေ စိတ်ပူပန်မှုတွေထပ်တူခံစားနေရတဲ့ ဖေဖေနဲ့ မေမေ့ကိုလည်း ပူလောင်မှုတွေ ထပ်မဖြစ်စေလိုတော့ပါဘူး။
ကျွန်မဘာကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မရင့်ကျက်သေးဘူးလို့ ပြောရတာလဲဆိုတော့ ကျွန်မ အိမ်ကနေ စခွဲခွာလာကတည်းက (ရန်ကုန်မှာ နေကတည်းကဆိုပါတော့) ဘာကိစ္စလေးမဆို ထစ်ကနဲဆိုရင် အိမ်ကို လှမ်းလှမ်းပြောတတ်တာပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက် မိဘတွေ ဘယ်လောက်စိတ်ပူသွားမယ်ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှ မတွေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီကိုရောက်တော့လည်း ဒီမှာကြုံတွေ့ရသမျှ အသေးအဖွဲကမှအစ အိမ်ကိုလှမ်းပြောပြတယ်။ မေမေ့ကိုဖုံးဆက်ပြီးငိုတယ်။ မေမေကဟိုဘက်ကနေ စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်ပြီး လိုက်ငိုတယ်။
ဒါတွေဟာ ကျွန်မအနေနဲ့ တကယ်ကို မလုပ်သင့်တဲ့ မရင့်ကျက်တဲ့ အပြုအမူတွေပါ။ တကယ်ဆိုရင် အဝေးမှာနေရတဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်အတွက် စိတ်တွေပူပန်နေရုံကလွဲလို့ ဘာမှမတတ်နိုင်မယ့်ဟာကို ကျွန်မအနေနဲ့ အဲဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးလေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လတုန်းက ကျွန်မ အိမ်ကို တစ်ခေါက်ပြန်သွားတော့ ကျွန်မရဲ့အဒေါ်တွေ၊ အမ၀မ်းကွဲတွေက ပြောပြကြတယ်။ ကျွန်မအဲဒီလို ဖုံးတွေဆက်ငိုယိုနေရင် မေမေဟာ ကျွန်မအတွက် ဘုရားရှိခိုးဆုတွေတောင်းရတာ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘုရားစင်ရှေ့ကကို မထတော့ဘူးတဲ့။ အဲဒီလိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မအရမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီး နောင်တတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ကျွန်မ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီးနေနေပါတယ်။ မေမေ့ကို သတိတွေရရင်လည်း အရင်တုန်းကလို ဖုံးတွေဆက်ပြီး မေမေ စိတ်ပူပန်အောင် မလုပ်တော့ပဲ အလွမ်းပြေ အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကိုပဲ နားထောင်နေတတ်တော့တယ်။ ဒီနေ့လည်း မေမေ့ကိုသတိရခြင်းတွေကို အမှတ်တရဖြစ်အောင် ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အမေ့အိမ် သီချင်းလေးကို ဒီပို့စ်လေးနဲ့ အတူတင်လိုက်တယ်။ အဝေးက မေမေ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Posted by အင်ကြင်းသန့် at 8:29 PM
အေး.. လွမ်းတယ်ကွာ.. အမေ့ကိုရော.. ထမင်းဟင်းတွေကိုရော... breakfast ကိုသူများနဲ့မတူ စားတဲ့ ဂျီးများ တဲ့ငါ့အတွက်ကတော့ အမြဲလွမ်းနေရတာ အမေ့ကို...
ဟုတ်တယ်....ငုဝါရေ၊ အဝေးမှာရောက်နေကြတဲ့ ဒို့သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ခံစားချက်တွေ အတူတူ ဖြစ်ကြမှာပါ.....
Your feeling and my feeling is almost same. After i read ur this post sure i won't do like that.
I always called and inform to my mom whatever i do eveyday,....I call my mom everyday by viber. Thanks so much my sister.I don't wamtto give any worry to my parents.